an`ireo sampan-draharahan`ny polisim-pirenena manerana ny Nosy; hamoaka ao anatin`ny fotoana
fohy ny fepetra rehetra mifanaraka amin`izany sehatr`asa izany mba hisorohana mialoha ireo fihetsika rehetra mifanohitra amin`ny lalàna sy ny fitsipi-pifehezana anatiny takian`ny asa maha-polisy. Miantso ny fahatsiarovan-tena sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay mba hifanome tanana hiady sy hanohitra ny kolikoly an-dalambe ny polisim-pirenena, hoy hatrany ny fanambarana ary hamafisina fa na dia sarotra aza ny ady amin`ny kolikoly dia tsy hilefitra manoloana izany ny Minisitera ary handray avy hatrany ny fepetra mifanandrify
amin`izany. Ankehitriny moa dia andraikitra roa lehibe no raisin`ny eo anivon`ny
polisim-pirenena : - Fandrindrana ny fifamoivizana, - Fitandroana ny fandriam-pahalemana hatrany
amin`ny elakelan-trano. Araka izany dia nampitomboina ny isan`ireo polisy miantsehatra noho ny
fetin`ny faran`ny taona sy ny taom-baovao. Ho an`Antananarivo manokana dia haraha-maso
manokana ireo jiro maro loko ka mangataka ny fiaraha-miasa amin`ny olom-pirenena hanome
fanampim-baovao. Mbola somary milamindamina aloha ny fifamoivoizana omaly voalohan’ny volana janoary, fa rehefa hiverina hiasa ny mpiasa ary hiditra mianatra ny mpianatra amin’io herinandro ambony io no tena ilaina io resaka fandrindrana ny fifamoivoizana io satria tena mampiteny ny moan any fitohanan’ny fiara; eo ihany ny hoe noho ny lalana efa tery sy ny hamaroan’ny fiara fa betsaka ihany koa ny tsy fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana ka mampikatso ; io indrindra no mila jerena akaiky sy hitondrana vahaolana haingana ary voakasik’io avokoa izay rehetra mampiasa ny arabe.